Vangelo di oggi 19 Settembre 2020 con le parole di papa Francesco | Ilblogdellapreghiera
Oziọma taa 19 Septemba 2020 na okwu Pope Francis
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 19, 2020 Septemba 20, 2020
Mụnna nwoke, mmadụ ga-asị: «Kedu ka ndị nwụrụ anwụ si eme ka ha si n’ọnwụ bilie? Kedu aru ha ga-eji bia? ». Onye nzuzu! Ihe ị kụrụ adịghị ndụ ma ọ bụrụ na ọ nwụrụ mbụ. N’ihe ị kụrụ, ị naghị agha mkpụrụ ahụ a ga-amụ, kama ọ bụ obere ọka wit ma ọ bụ ụdị ọzọ. Otú a ka nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu di: anāgha ya n'ire-ure, emere ka o si n'ọnwu bilie; agha ya n’ọdachi, ọ na-ebili na ebube; a na-agha ya n’adịghị ike, ọ na-ebili n’ike; anụ ahụ na-akụ, mmụọ nke mmụọ na-akpọlite.
Ọ bụrụ na e nwere anụ ahụ, e nwekwara aru nke mmụọ. N’ezie, e dere na nwoke mbụ, bụ́ Adam, ghọrọ ihe dị ndụ, ma Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ. Enweghi aru nke mmuo na mbu, ma nke anumanu, ma nke ahu bu nke ime mmuo. Nwoke mbụ, e si n’ụwa were ụwa; Nwoke nke abụọ si n’eluigwe bịa. Dị ka mmadụ si dị, otú ahụ ka ndị dị n’ụwa dị; ma dika elu-igwe si di, otú a ka ndi elu-igwe di. Dịka anyị dị ka onye nke ụwa, otu a ka anyị ga-adị ka onye nke eluigwe.
Lk 8,4: 15-XNUMX
N’oge ahụ, ka oke igwe mmadụ gbakọtara ma ndị si n’obodo niile bịakwute ya, Jizọs kwuru n’ilu ​​ya, sị: «Ọgha mkpụrụ gawara ịgha mkpụrụ ya. Ka ọ nọ na-agha mkpụrụ, ụfọdụ dara n'okporo ụzọ ahụ wee zọọ ha ụkwụ, anụ ufe nke eluigwe riri ya. Akụkụ ọzọ dara na nkume ma, ozugbo ọ puru, ọ kpọnwụrụ n'ihi enweghị mmiri. Akụkụ ọzọ dabara n'etiti ahịhịa, ogwu na-eto na ya, kpagbuo ya. Akụkụ ọzọ dara n'ala dị mma, pulite ma mịa otu narị okpukpu. " Mgbe o kwusịrị nke a, o tiri mkpu, sị: "Onye ọ bụla nwere ntị ige ntị, nụrụ!"
Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ajụjụ ihe ilu a pụtara. O wee sị: "E nyere gị ka ị mara ihe omimi nke alaeze Chineke, mana nye ndị ọzọ naanị na ilu, nke mere na
ịhụ adịghị ahụ
ma site n’ige ntị, ha adịghị aghọta.
Ihe ilu a putara bu na nkpuru a bu okwu Chineke, mkpuru ahu ndi dara n’uzo bu ndi gere ya nti, ma mgbe ahu ekwensu biara, wepu okwu ahu n’obi ha, ka o ghara ime na, ikwere, azọpụta. Ndi nọ na nkume bu ndi, mgbe ha nuru, were okwu obi uto nabata Okwu ahu, ma ha enweghi mgbọrọgwụ; ha kwere na nwa oge, ma na ọnwụnwa ha dara. Ndị ahụ dabara n’agba ogwu bụ ndị, mgbe ha gechara ntị, na-echegbu onwe ha n’ụzọ n’ụzọ nke nchegbu, akụnụba na ihe ụtọ nke ndụ ma ghara itozu oke. Ndị nọ n'ala dị mma bụ ndị, mgbe ha jisịrị obi dị mma jupụta Okwu ahụ, na-edobe ya ma jiri ntachi obi na-amị mkpụrụ.
Onye a nke ọgha mkpụrụ ahụ bụ “nne” nke ilu niile, n'ihi na ọ na-ekwu maka ige ntị n'Okwu ahụ. Ọ na-echetara anyị na ọ bụ mkpụrụ na-amị mkpụrụ ma na-arụpụta ihe; Chineke n’esapụsịkwa kesasịa ya n’ebe niile, n’agbanyeghi n’efu. Otú ahụ ka obi Chineke dị! Onye ọ bụla n’ime anyị bụ ala nke mkpụrụ nke Okwu ahụ na-ada, ọ dịghị onye na-ewepu. Anyị nwere ike ịjụ onwe anyị: olee ụdị mbara ala m bụ? Ọ bụrụ na anyị chọrọ, site n’amara Chineke, anyị nwere ike ịbụ ezigbo ala, jiri akọ ma kọọkwa nke ọma, ka mkpụrụ nke Okwu ahụ chaa acha. Ọ dịlarị n'ime obi anyị, mana ịme ka ọ mịa mkpụrụ dabere na anyị, ọ dabere na nnabata anyị debere maka mkpụrụ a. (Angelus, 12 Julaị 2020)
← Na post gara aga Gara aga post:San Gennaro, Saint nke ụbọchị Septemba 19th
Ọzọ Post → Post ozo:Ndị isi Vatican abụọ binyere aka na nkwekọrịta iji rụkọta ọrụ na ọgụ megide nrụrụ aka